Ny Nosy Seychelles dia nanome ny satroboninahitry ny WTA ho an'ny tanjona romantika indrindra manerantany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Ny Nosy Seychelles dia nanome ny satroboninahitry ny WTA ho an'ny tanjona romantika indrindra eto an-tany
Ny Nosy Seychelles dia nanome ny satroboninahitry ny WTA ho an'ny tanjona romantika indrindra eto an-tany
Nohajaina noho ny hatsarany mahavariana, ny Nosy Seychelles Nahazo loka ny tanjona romantika indrindra eran-tany ho an'ny taona 2020 amin'ny Grand Final of the World Travel Award.
Ny paradisa madio dia nambara ho mpandresy manerantany amin'ity loka ity taorian'ny fampielezan-kevitra nandritra ny herintaona sy ny fizotry ny fifidianana tamin'ny zoma 27 novambra 2020.
Ny nosy dia efa ela no nanangana laza ho iray amin'ny toerana itiavana indrindra eran'izao tontolo izao, manintona ny mpivady avy amin'ny vazan'izao tontolo izao. Ireo nosy dia somary tsy voakitika sy voatahiry ara-pivavahana, ireo nosy dia toerana fialantsasatra tonga lafatra ho an'ny mpivady maniry ny ho afa-mandositra ny sahirana amin'ny fiainana andavanandro ary mamorona fifandraisana lalindalina kokoa.
Ireo faniriana ireo dia vao mainka nihanitombo tamin'ny areti-mandringana ankehitriny satria maro no mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fankamamiana isaky ny mandeha. Ny toerana tropikaly dia mampirehareha ny morontsiraka fotsy, misy morontsiraka turquoise, voahodidin'ny tendrombohitra maitso, izay mifangaro amin'ny fialokalofana hafakely avy amin'ny zava-misy masiaka.
Ramatoa Sherin Francis, Lehiben'ny Executive Board an'ny fizahan-tany Seychelles dia naneho ny fahafaham-pony tamin'ny fanambaràna satria ny toeran-kaleha dia iray amin'ireo mpandresy amin'ny Grand Final manome an'i Seychelles fampirantiana be sy fahitana takiana mba hampisehoana ny hatsarany sy ny hatsarany.
"Ankoatr'ireo endri-javatra mahavariana ao amin'ny toerana itodiana, dia tokony homena ny mpiara-miombon'antoka amintsika ihany koa ny trosa satria izy ireo koa dia manana tànana amin'ny famoronana fahatsiarovana manintona sy maharitra izay miaraka amina fialantsasatra eny amoron-tsiraka. Ity loka ity dia voninahitra lehibe nomena an'i Seychelles sy ny indostria eto an-toerana ary tonga fampaherezana lehibe nandritra ireny fotoan-tsarotra ireny, "hoy Ramatoa Francis.
Ny firenena nosy dia tsy manolotra hatsaran-tarehy voajanahary tsy voadona fotsiny, fa mirehareha koa amin'ny orinasa marobe izay isan'ny mpivady misafidy haka aina na hamatotra ny fatotra. Io fitambarana mahatalanjona io no nampisondrotra ny Nosy Seychelles tamin'ny toerany ho Destiny Romantika Manerantany ho an'ny 2020.
Ny World Travel Awards dia nanaiky, nanome valisoa ary nankalaza ny hatsarana tamin'ny sehatra lehibe rehetra tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany, fizahan-tany ary fandraisam-bahiny nanomboka ny taona 1993 niaraka tamin'ny marika ekena eran'izao tontolo izao ho marika farany amin'ny hatsaran'ny indostria.
Ny lanonana mari-pankasitrahana virtoaly, hetsika iray lehibe teo amin'ny kalandrie indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, dia natrehin'ireo mpanapa-kevitra sy filoham-pirenena lehibe hafa ao amin'ity orinasa ity koa ankoatry ny fampahalalam-baovao mpivarotra sy ny mpanjifa.
Ny zava-bita manan-kaja dia taorian'ny fandresen'ny toerana ho an'ny Fizahan-tany maharitra maharitra any amin'ny Ranomasimbe Indianina ho an'ny taona faharoa misesy ho an'ny faha-27 taonan'ny World Travel Awards. Ny faharetana sy ny tantaram-pitiavana dia mandeha an-tanana miaraka amin'ny faharetana ho fanalahidin'ny fitehirizana ny tantaram-pitiavana ao amin'ny paradisa nosy.
Hevitra momba ny pilina Herpesyl-Tena azo antoka ve ny herpesyl? TSY MAINTSY VAKIO !!